बालबालिकामा कोरोना भाइरसकाे यस्ताे लक्षणहरू देखिन सक्छ, कसरी घरमै हेरचाह गर्ने ? – Digital Khabar
Covid 19 UpdatesHealthInternational News
By डिजिटल खबर Last updated May 18, 2021
०४ जेष्ठ, एजेन्सी । नेपाल र भारत लगायतका देश कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । यस कारण, युवा, वृद्धहरू मात्र होइन बालबालिकाहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन् । यो भाइरसले सबै उमेरका बालबालिकाहरूलाई असर पुर्याइरहेको छ ।
डाक्टरहरूका अनुसार बालबालिकाहरूमा कोरोना भाइरसका लक्षणहरू विरलै देखिन्छन् वा देखिदैन पनि ।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूमा कोरोना भाइरसका लक्षणहरू पहिचान गर्न र समयमै यसको उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ताकि यो रोगले गम्भीर रूप लिन नपओस् ।
भारत सरकारले बालबालिकाहरूको कोरोना संक्रमणलाई लिएर विशेष जानकारी सार्वज्निक गरेको छ । त्यहाँका स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कोभिड १९ बाट प्रभावित बालबालिकाहरूमा प्रायः हल्का ज्वरो, खोकी, चिसो, श्वास प्रश्वासमा समस्या, थकान, घाँटी दुख्ने, पखाला, खानामा स्वाद नआउनु, बास्ना नआउनु जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ ।
लगातार सिगान बग्ने लक्षण बाहेक, बालबालिकाहरूको पेट र आन्द्रासँग सम्बन्धित समस्याहरूका साथ केही असामान्य लक्षणहरू देखिएका छन्।
अनुसन्धानका अनुसार, बालबालिकाहरूमा मल्टि सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनिने नयाँ सिन्ड्रोम पनि देखिएको छ । यो एक रोग होइन तर लक्षणहरूमा आधारित सिन्ड्रोम हो।
भनिन्छ कोभिड १९ बाट संक्रमित धेरैजसो बालबालिकाहरूमा सामान्य लक्षणहरू जस्तै हल्का ज्वरो, सर्दि, पखाला लाग्नु इत्यादि हुन्छन्।
तर मल्टि सिस्टम ईन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमबाट पीडित बालबालिकाहरूमा मुटु, फोक्सो, रक्तनली, सूजन, मिर्गौला, पाचन प्रणाली, मस्तिष्क, छाला वा आँखामा असर देखिएको छ।
बालबालिकाहरूमा मल्टी सिस्ट इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमको सामान्य लक्षणहरू जस्तै निरन्तर ज्वरो, बान्ता, पेट दुख्नु, छालामा दाग देखिनु, थकान, धड्कन बढ्नु, आँखा रातो हुनु, ओठमा सूजन, हात र खुट्टामा सूजन, टाउको दुख्ने, शरीरको कुनै पनि भाग यसमा गाँठो बन्नु आदि रहेका छन् ।
यदि कोरोना घरमाकसैलाई कोरोना पोजेटिभ छ भने बालबालिकाहरूमा कोरोना संक्रमणका लक्षणहरू देखिएनन् भने पनि उनीहरूको स्क्रीनिंग गरिनु पर्छ।
बालबालिकाहरूमा सामान्य लक्षण जस्तो घाँटी दुख्नु, खोकी, जिउ दुख्ने वा पेटसँग सम्बन्धित समस्या भएमा परीक्षणको आवश्यकता पर्दैन । उनीहरुलाई होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ ।
यस बाहेक, फोक्सोमा सामान्य समस्या, मुटु रोग, कार्निक अर्गन डिस्फंक्शन र मोटोपन जस्ता समस्या छ भने पनि घरमै उपचार गर्न सकिन्छ ।
डाक्टरका अनुसार ज्वरो आएको प्रत्येक ४ देखि ६ घण्टामा प्यारासिटामोल १०–१५ एमजी लिन सकिन्छ । यदि घाँटी दुखाइ वा कफ भएको छ भने बालबालिका र युवाहरुलाई तातो पानीमा थोरै नुन राखेर गार्गल गर्न सक्छन्। बच्चाहरूलाई ओरल रिहाइड्रेसनको समस्या समाधान र पौष्टिक आहार दिइनु पर्दछ।
ब्राजिलको कोपा अमेरिका कपमा लगातार दोस्रो जित
काेराेना भाइरस संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने राष्ट्र भारत भएकाे छ, बेलायत सामान्यतर्फ फर्कदै, अरूकाे अवस्था के छ ?
४ असार २०७८, शुक्रबार ११:३८
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आज…
काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पदा…
Digital Desk ४ असार २०७८, शुक्रबार ११:५१
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आज विश्वासको…
४ असार २०७८, शुक्रबार ११:२६
४ असार २०७८, शुक्रबार ११:०५
Prev Next 1 of 1,064